Gulf Air na -amaliteghachi ụgbọ elu si Bahrain gaa n'ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Gulf Air na -amaliteghachi ụgbọ elu si Bahrain gaa n'ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ Bahrain na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Onye na -ebu ụgbọ ala nke alaeze Bahrain na -amalitegharị ụgbọ elu ndị njem echekwara na Russian Federation.
A ga -eji ụgbọ elu si na ọdụ ụgbọ elu na -aga Bahrain kwa izu na Satọde na Mọnde.
Na Satọde, ọbịbịa Domodedovo dị na 14:05, ọpụpụ na 14:50.
Na Mọnde, ọbịbịa dị na 07:10, ọpụpụ na 08:00.
Site na Ọgọst 14, 2021, onye na -ebu mba nke alaeze Bahrain maliteghachiri ụgbọ elu oge niile site na ọdụ ụgbọ elu Moscow Domodedovo.
A ga -eji ụgbọ elu si na ọdụ ụgbọ elu na -aga Bahrain kwa izu na Satọde na Mọnde. Na Satọde, mbata na Domodedovo dị na 14:05, ọpụpụ na 14: 50*. Na Mọnde, ọbịbịa dị na 07:10, ọpụpụ na 08:00*.
Gulf Air na Moscow Ọdụ ụgbọ elu Domodedovo anọwo na -arụkọ ọrụ ọnụ kemgbe 2014. Na Septemba 2017, a na -abawanye ụgbọ elu ahụ kwa ụbọchị n'ihi ihe ịga nke ọma nke ụzọ ahụ. Na Machị 2019, a kwụsịrị ụgbọ elu na Bahrain n'ihi mmechi nke ụgbọ elu mba ofesi n'ihi Covid-19. Kemgbe mmalite nke njikọta ya na ọdụ ụgbọ elu Domodedovo, Gulf Air arụwo ọrụ mbupu na ọdịda 2,732 wee bufee ndị njem 180,000 n'okporo ụzọ akọwapụtara.
Ụzọ Bahrain pụrụ iche maka ọdụ ụgbọ elu Moscow, ahịrị ikuku a na -enye ọtụtụ ebe dị iche iche nke otu n'ime netwọkụ okporo ụzọ kachasị na Middle East.
Gulf Air bụ ụgbọ elu gọọmentị nwe yana onye na-ebu ọkọlọtọ nke alaeze Bahrain. N'ịbụ nke hiwere isi na Muharraq, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ahụ na -arụ ọrụ ụgbọ elu emebere njem na njem 52 na mba 28 n'ofe Afrịka, Eshia na Europe. Isi ụlọ ọrụ ya bụ Bahrain International Airport.
* oge mbata / mbata ka egosiri na oge Moscow